'Ihlobo elikhohlakeleyo' -Ingqungquthela entsha yeAmazon Prime | IBezzia
USusana godoy | 20/07/2021 14:00 | Iindaba
Kuyinyani ukuba uninzi lwethu luyalithanda ihlobo, ngamanye amaxesha akukho khetho luluhle kwiintsomi. Sele sibonile kwizihlandlo ezininzi ukuba amaxesha onyaka asehlotyeni awahlali evela njengoko kulindelekile. Ke, Amazon Prime ukubheja kwi-thriller entsha eya kukuthimba.
Kuluhlu olunesihloko 'Ihlobo Elikhohlakeleyo' kwaye kuninzi asixelele kona. Kukhetho olufanelekileyo ukonwatyiswa xa ubushushu bucofa kwaye awukwazi ukushiya ikhaya lakho okanye indawo yeholide. Ngokuqinisekileyo uya kukhetha ukuzonwabisa ngale ndlela. Ngaba ufuna ukwazi ngakumbi?
1 Ukuveliswa 'kwehlobo elikhohlakeleyo'
2 Ngoobani abalinganiswa abaphambili 'behlobo elikhohlakeleyo'?
3 Yintoni esiza kuyifumana kolu thotho 'Ihlobo elikhohlakeleyo'
4 Xa isungula kwiAmazon Prime
Ukuveliswa 'kwehlobo elikhohlakeleyo'
Amagama awaziwayo njengoJessica Biel sele eshiya imveliso. Ewe, umdlali weqonga uthathe isigqibo sokuya emva kwezigcawu emva kwesitayile sakhe kuMoni. Impumelelo, ethe ngexesha lokuqala lexesha yajolisa kubuntu bakhe nalapho afumana khona uphononongo olukhulu. Kuyinyani ukuba imisebenzi kaBiel yayisele inokubalwa ngamashumi kunye nakwimpumelelo yakhe. Ke, ngokuqinisekileyo ngoku awuyi kushiyeka ngasemva. Kodwa akafiki yedwa, kodwa naye unaye uMichelle Purple. Iingqondo ezimbini ezintle kunye nokugxila ngokucacileyo ekuziseni uthotho ebomini kwiAmazon Prime eya kukuchukumisa.
Ngoobani abalinganiswa abaphambili 'behlobo elikhohlakeleyo'?
Nangona icandelo lokuvelisa libaluleke ngokwenene, abalinganiswa abaphambili bololuhlu nabo abakude ngasemva. Kuba kule meko ngabo abaya kuyilungisa. Siqala nge U-Olivia Holt, ongumdlali weqonga kunye nemvumi esiyibonileyo kuthotho lweDisney Channel, okoko umsebenzi wakhe waqala njengomntwana. Kwelinye icala kukwakho noChiara Aurelia, umdlali weqonga waseMelika. UMichael Landes, esikhe sambona kuFinal Destination 2, Froy Gutiérrez, Harley Quinn Smith okanye uBlake Lee bayakuba ngabo uza kubona isahluko emva kwesahluko.
Yintoni esiza kuyifumana kolu thotho 'Ihlobo elikhohlakeleyo'
Inyani yile yokuba luthotho olungenanto yakwenza nolunye uthotho lweethrikhi. Kuba kule meko Iya kugxila kwishumi leminyaka le-90 kwaye iya kubalisa ihlobo lonke le-3. Kuyo siza kuxelelwa isiganeko esoyikekayo sokunyamalala komfazi omncinci. Kodwa njengokunyamalala, elinye ibhinqa eliselula liba lelinye lawona athandwa kakhulu. Oko kukuthi, kubonakala ngathi ithatha indawo yentombazana elahlekileyo. Nangona kubonakala ngathi phakathi kwezi zinto zimbini zazingangqinelani, ayizizo zonke izinto ezikhazimlayo ezisoloko zenziwe ngegolide. Eli bhinqa liselula silikhankanyileyo lalibonakala njengelinye lawona mantombazana amnandi kunabo bonke, kodwa yena ujika ajonge kwelinye. Ewe kude kube sibona uthotho asiyi kusazi isizathu sokuziphatha.
Ngoku ukuba sinecebo, Yintoni eyahlukileyo ngolu ngcelele lwenkulumbuso yeAmazon? Ewe, nangona iimfihlo kunye namaqhinga ayinxalenye yayo, ayisiyiyo loo nkcukacha kuphela. Kodwa nganye yeziqendu esiza kuyibona, ziya kudibana ngokweembono ezahlukeneyo. Kuphela emva koko, mhlawumbi, siya kuqonda ngakumbi uluvo ngalunye kunye nengcambu nganye yembali. Ke ngenxa yoko, mhlawumbi sele sisazi ukuba iya kuba licebo eliya kusitsala njengangaphambili. Ngaba awucingi?
Xa isungula kwiAmazon Prime
Kufuneka kuthiwe siza kufumana iziqendu ezili-10 zolu ngcelele. Sinokubabona ukusuka ngoLwesihlanu, Agasti 6. Apho sele unedinga kunye neli bali elibonakala lingakushiyi ungakhathali. Iya kuqala nge Isiqendu somqhubi wenqwelomoya esikhokelwa nguMax Winkler. Ewe kunjalo, sele ijolise ekubeni yimpumelelo enkulu. Ngaba uza kubeka 'ihlobo elikhohlakeleyo' phakathi kweyona nto uyithandayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » Ukubheja kweAmazon Prime kwi-thriller 'kwihlobo elikhohlakeleyo'